कलियुगका कुरा: September 2010
विद्यावारिधी पाउन क्यार्न पर्छ...
यो मानार्थ विद्यावारिधीको भ्यालु चाहिँ कति छ कुन्नी?अस्ति मन्त्री विजय गच्छदार,केपी ओलीहर्लाई अमेरिकाको ग्रिनफिल्ड इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले फेटा गुटार विद्यावारिधि देको टिभीहर्ले देख्याथे कान्तिपुर पत्रिकामा त्यस्कै एकजना साहु रामेश्वर थापाले विद्यावारिधी पाको फोटो थियो। पढ्न अल्छि लाइरा बेलाँ लिइदिम कि के हो एउटा विद्यावारिधी म नि। कसैको लिङ्क होला नि यस्तो विद्यावारिधी बाँड्नेहर्सँग...
नेपालमा नि एयर ट्राफिक
कार्यक्रमको लागि चितवन आउँदै थिए। एयरपोर्टमा चेक गर्ने प्रहरीको नेमप्लेटमा नाम दिनेश ढाँट थियो। पश्चिम तिरको क्षेत्रीमा यस्तो थर पनि हुनेरैछ। ढाँटले दिएको एउटा जानकारी पो सबैभन्दा हाँसो उठ्दो थियो। आजभोलि ट्राफिक जामले गर्दा बेलाँ जहाज उड्दैन रे। तपाइहरुलाई जहाजमा राखिरहालान्। नभन्दै एयरपोर्टमा ट्राफिक जाम भन्दै हाम्लाई ४५ मिनेट जहाज भित्र थुनेर राखे...
हैन हउ नेपाली काँग्रेस कित सुस्त हो...
नेपाली काँग्रेसले देश विकास गर्न किन ढिला नगरोस् जाबो पार्टीको भोट गन्न त एक सातामा सक्दो रहनेछ । संविधानसभाको चुनावमा पनि काँग्रेसका जस्तै मतदान अधिकारी भए त अहिलेसम्म पनि चुतावको रिजल्ट नआउने रैच। एक दुई जनाको परिणाम हेर्न मन थियो। कहिलेसम्म कुर्नु पर्ने हो .......
छोरा पाउनु कहाँ कहाँ छ कहाँ कन्दनी बनाउन हतार भन्थे गाउँतिर। शहराँ काँ त्यस्तो हुन्छ र। बरु यस्तो फोटो पो देख्न पाइन्छ। एक महिनापछि बच्चाको बाउ बन्न लागेको साथी सतिशले 'टेस्ट ड्राइभ' भन्दै यस्तो फोटो अपलोड गरेको छ। प्रेक्टिस त गर्नुपरो नि बेलैमा (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
टु‌गो लाग्यो- यसपाली दशै‌ विपश्यना ध्यान शिविराँ। प्रत्येक दशै‌मा बियर कम्पनीलाई मात्र कति नाफा कमाइदिने हो र ....
आन्दोलन चर्काओ न थाइलैन्डमा
यो रातो सर्टवालाहर्को आन्दोलन थाइलैन्डमा अलि मच्चाउन लगाउन परो। अस्ति नै २५/२६ हजारैमा ५/६ दिन थाइलैण्ड घुमाइदिने ट्राभल एजेन्सीको विज्ञापन पत्रिकाँ आएसी बुढीलाई गफ दिइहालेँ -यसपालि दशैं थाइलैण्डमा। एजेन्सीले अहिले ट्याक्स/स्याक्स भन्दै ७/८ हजार थपो। आफूले हिसाब गरिल्याउँदा २५ हजारैआँ नि नसकिने भो। रातो सर्टवालाहर्को आ...न्दोलन चर्केदेखि चित्त बुझ्न/बुझाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो। लउन कसैको लिङ्क छैन..
रियल जुसको विज्ञापनमा कुमारी
नायिका करिष्मा मानन्धर र भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलाई त रियल जुसको विज्ञापनाँ देख्याथेँ। हुँदा हुँदा जिउँदी देवी कुमारीलाई नि विज्ञापनाँ खेलाइसकेछ है रियल जुसले। आम्ममा कहाँसम्म हो यिन्हरुको पहुँच। हुन त दुताबासै लाछ...
(कमेन्ट यी कुमारी होइन गणेश हुन्)
रियल जुसमा लेदो
ए रियल जुसमा आजभोलि लेदो पाउन छोडिएछ। पत्रिकाहरुआँ विज्ञापन आइराछ के रियल जुसको...
जतातै जात्रा छ
खोई के के मात्र जात्रा हेर्ने हो र! जीउँदी देवीको जात्रा हेर्न जाम भने नि नेताहर्कै जात्रा देखिन्छ त्यहाँ नि,फेरि ज्ञानेन्द्रले हिजै हेर्दिभ्याए। काँग्रेसको जात्रा हेरम् भने नि जम्मै भारतीय गाडीआँ चारतारे झण्डा छ। बरु घरतिरै जान पर्ला। झरीले गर्दा धोएर सुक्न नपाको कपडा कोठैआँ डोरी टाँगेर सुकाइरा'को जात्रै छ घराँ नि। अरु जात्रा के हेर्न हिड्नु .....
सुशील कोइरालालाई धपेडीमा पारेर...
ई चुनवा जित्नासाथ सुशील कोइरालालाई विरामी भर अस्पताल लानुपर्ने पो भएछ। विचराको रेखदेख गर्ने जहान परिवार पनि छैनन्। बुढा मान्छेलाई धपेडीमा पारी पारी झन् कम्जोर बनाउने भए सभापतिआँ जिताएर। (फेसबुकाँ आको एउटा कमेन्ट बुढा कार्यकर्तालाई बियर खुवाउन परो भनेर हस्पिटल बसेका त होइनन् होला) ...
ज्ञानेन्द्रलाई सजिलै भच
कुमारीको दर्शन गर्न हनुमानढोका जाँदा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुरक्षा दिन सकिन्न भन्दै सर्कारले ९ जीवित कुमारीहरुको नै निर्मल निवास पुर्याइदिएछ। शाहको विभिन्न मन्दिरहरु घुम्ने विशेषै रुचि देखिन्छ। मलाई त डर लाइराच कतै भोलिपर्सी ज्ञानेन्द्रले पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, मनकामना, लुम्बिनी दर्शन गर्न जाने भन्दा सर्कारले हैन सुरक्षा दिन सकिन्न भन्दै त्यहाँका मुर्ति नै निर्मल निवास नै पुर्याइदिन्छ कि। शाहका मुर्तिमा विशेषै रुचि थियो रे भन्ने नि केटाकेटीआँ सुनेको...
फल खान नजानेसी....
एभोकाडो भन्ने जातको फलको नाम खुब सुने नि खान पाइयाथेन। आज भाटभटेनी जाँदा बुढीले सोधी के हुन् यी भनेर बाठो हुँदै तीन्टा लिएर आएँ करिब डेड सय रुप्पेमा। खाने तरिका था'थेन। चक्कुले काटेर भित्रको डल्लो फालेर खान थालेको राम राम कति तितो हो? बोक्रैसहित खान नहुने जात हो रच कि बा नपाकेर हो...तीन चम्चा चिनी हालिसके‌ मुखाँ तितो अझै गाछैन.....
'चार कक्षामा पढ्ने छोरीले साबुन र फेसवास छोडेर क्लोजअप टुथपेस्टले पुरै अनुहार धुन थालिछ,' साथीले तलाई हाँस्नुपर्ने कारण हुनसक्छ भन्दै मेसेज पठाछ -'स्कूलमा विज्ञान पढाउने मिसले नयाँ नयाँ प्रयोग गरेरै वैज्ञानिकहरुको जन्म भएको हो प्रयोग गर्न डराउन हुँदैन भन्दै उक्साइरहेका छन् रे'...
कति थप्या बैंक मात्र....
विदेशाँ कति हुन्छन् बैंक अनि कति बैंक उद्‍घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आँफै जान्छन् ? नेपालाँ 'क'श्रेणीका बैंक मात्र २९ ओटा पुगिसके। प्रमले आजै कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकको उद्‍घाटन गरे। विकास बैंक भन्ने 'ख'श्रेणीका बैंक त ५० नाघिसके क्यारे। बैंक मात्र कति बढाको हो। कुनै बैंक पैसा मात्र उठाएर भागे भने क्यार्ने हो ? बैंकको शाखा ...पो थुप्रो हुने होला र बैंकै मात्र बढार क्यार्ने...
दशैंमा नयाँ प्रधानमन्त्री...
हन हउ!काग्रेस अधिवेशनाँ भुलिराका बेलाँ माउवादी र एमालेले खतरा सहमती गरेचन् नि अस्ति। काँग्रेस पनि सर्काराँ आर सहमतीय सरकार बन्ने भए त्यस्को नेतृत्व झलनाथले गर्ने बहुमतीय सरकार बन्नेभए त्यस्को नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने। हन हाम्ले दशैंमा अरु नपाए नि नयाँ प्रधानमन्त्री पाम्छम् कि के हो....
काँग्रेसले महिला हिंसा विरुद्ध नेतृत्व गर्नेभएछ...
सर्कारको नेतृत्व गर्न नपाए नि काँग्रेसहर्ले महिलामाथि हुने हिंसा र यौन शोषणको नेतृत्व गर्ने भ'छन्। प्रतिवेदनाँ लेख्याछ-कांग्रेसको १२ महाधिवेशन महिला विरुद्ध हुने यौन शोषण, घरेलु हिंसामा दोषी कुनै पनि व्यक्ति कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न वा रहन नसक्ने वैधानिक व्यवस्थाको घोषणा गर्दै यो सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ...संकल्प व्यक्त गर्दछ।' महाधिवेशन बेलाँ नि ठमेलाँ उतिसारो रौनक किन छैन भनेको त नीति नै कडा रच....
काँग्रेसको महाधिवेशनले पारित गर्ने नीतिआँ नि यस्तो लेख्या रच त.. नेपालका गरीब, किसान, मजदूर, दलित, उपेक्षित पछाडि परेका जात जाति आदिवासी जनजाति, भूमिहिन, सुकुम्वासीलगायत नेपालीहरुको समुन्नतिका लागि काग्रेस सरकारले नीति र कार्यक्रमहरु वनाउनु पर्दछ।
लउ मन्त्री नै ओसारपसारमा लागेचन् त....
युएन कन्भेन्सनमा 'हिमाल जोगाऊ' भन्दै मार्चपास गर्न न्युयोर्क लैजान्छु भनेर पर्वतारोहीहर्सँग १५ लाख रुपैयाँ उठाएर वनमन्त्री दीपक बोहरा सुटुक्क हिड्दिएचन् अम्रिकातिर। बिचरा ११ नेपाली पर्वतारोहीहरु मन्त्रीले नै पैसा ठग्दे भन्दैचन्। कलाकारले पैसा देउ विदेश लइदिन्छु भनेर ठगे भन्या त सुन्या हो अहिले मन्त्री नै त्यसैमा लाएचन्...। डर त म्यानपावराँ लाकाहर्लाई पो हुने भो त; नयाँ कम्पिटिटर थपिए त्यसमाथि मन्त्री नै...
प्रचण्डलाई नपत्याएको कि मलाई...
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने पक्का भो भनेर फेसबुकमा स्टाटस राखेको मरे कमेन्ट आउँदैन त यार। केटाहरुले पत्याएनन् क्या हो। केटाकेटीआँ पढेको'बाघले बाख्रा खायो भनेर चिच्याउने केटा'को कथाजस्तो भो जस्तो छ। प्रचण्डले यसअगाडि नि पटक पटक उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु भन्ने तर नलिएका भ'र केटाहरुले नपत्याका होलान्। यसपटक साँच्चै हो के...
चाइनिजको छवि खत्तम
चाइनाको छवि त खत्तमै भारैछ नि नेपालाँ। हिजो स्याउ किन्दै गर्दा फलफूल पसलेले भनिन्-'चाइनिज स्याउ ९० रुप्पै किलो,इन्डियन स्याउ ११०। तर चाइनिज स्याउ त प्लास्टिकको बनाउँछ कि भन्ने डर लाउछ।'हिजै रेष्टुरेन्टमा कफि खाँदै गर्दा टेबलाँ भाको चिनी जति हालेपनि गुलियो नलागेपछि साथीले भन्यो -यो चिनी चाइनिज परेछ कि के हो ?(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
जितेछ नेपालले भारतलाई
भारतलाई जितिएछ नि फुटबलाँ। फिफा र्‍याकिङाँ नेपाल 156 मा छ, भारत 160 मा। हाम्रातिरका श्रीलङ्का,बंगलादेश र माल्दिभ्स अगाडि रच हामीभन्दा। फ्रान्स त २७ आँ पुगेछ नि।
आजका पत्रिकामा छापिएको फोटो देखाएर काकालाई कस्तो खुशी भाको है हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको काकाले मुख फर्काइहाले नि। मुला चिठ्ठा परेपछि को खुशी हुन्न भनेर...दुई दुई ठाउँमा हारेका मान्छे राजिनामा दिएको दुई दुई महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइरहे जो पनि खुसी हुन्छ रे। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन्। हा हा हा हा....)
संविधान निर्माण गर्ने आन्दोलनमा....
गाउँका माउवादी काका काठमाडौं आर नेतालाई भेट्न जानुभाथ्यो। नेताले काकालाई भनेछन्- काम्रेड यी काँग्रेस एमालेले केही गर्न दिएनन नत्र देशमा गरीबको मुहारमा हामीले परिवर्तन लाइसक्थेम। काका अलि क्रान्तिकारी छन्- 'आन्दोलन गरम्न त काम्रेड'प्रस्ताव राखेछन्। काम्रेडले भनेछन् हामी आन्दोलनमै त छम्नी। यहाँ टेवलमा बसेर गर्ने आन्दोलन भइराछ अहिले नआतिम्न....माउवादी परिवर्तन भइरहेकै छन्। संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि आँफैमा आन्दोलन हो रे।
लोभले लाभ-लाभले विलाप भन्छन्। साइबरसंसारका कंसजु ब्रदर्सले राम्रै गरिरहेका थिए-आइटीमा लागेर। बेकाराँ बढी लोभ गरेर बिदेशी फिल्म डाउनलोड गरेर बेच्दा पुलिसले पक्डिएछ। बिचराका बाबुलाई कति टेन्सन भइरा होला। ठूला मान्छे हुन् कि तिनका परिवार वा छोराछोरी अलि बढी नै सचेत हुनुपर्छ...
आधा च्यानल किन झ्यार झ्यार...
यो केबल कम्पनीहर्लाई'डिस टीभी होम/टिभी'वालाहर्ले किने कि के हो? जहानले स्याटालाइट टिभी राख्न कर गरिरा बेलाँ यही केबल ठीक छ भनिराछु, झन् झ्यार झ्यार -झ्यार झ्यार मात्र आउँछ यार आधा सरो टिभी च्यानलहरु। नबुझेका कुरा नि यो केबल घुसारेको टिभीआँ किन कुनै च्यानल राम्रो आउने कुनै झ्यार झ्यार आउने हो? रिस उठेर डिस/होम टिभी राखम् भनी पनि आँफैलाई घाटो..।
कति लामो हरन....
यति लामो हरन कहिले-कहीँ लगाको सुनेको थिइन। कलकींमा ट्राफिकले अलिकति सोधपुछ गरेर लाइसेन्स के लिएर गका थिए; रिसाका ड्राइभरले 'यिन्लाई दशैं लाग्यो'भन्दै बजाउन थालेको हरन बल्खुसम्म बजाउँदै सय कै स्पिडमा झैं बस कुदाइरह्यो। ट्राफिक माथि ड्राइभरको रिस हामी यात्रुले बस भित्र हल्लदैं हल्लदै सहिरह्यौं। बसबाट झरेसी लाग्यो आज बिहान त बाँच्चियो...
भारतीय भन्दा त चाइनिज डेलिगेसन फाइदा
यो चाइनिज डेलिगेसन आउँदा चाहिँ पर्यटनलाई अलिक फाइदा हुनेरैछ।भारतीय आए भने त जम्मा एक दुई जना आउँछन्। चाइनिज आउँदा २०/२२ जना आउने, अनि आएसी लुम्बिनी भ्रमण नि गाकै हुन्छन्। तर भारतले झै‌ त गर्दैनन् होलान् नि फेरि लुम्बिनी मन पारेर मोराहरुले नि लुम्बिनी चाइनमा पर्छ भनेर प्रचार गर्दे भने त खत्तमै हुन्छ। अहिले नेदरल्याण्डमा भइरहेको फोटो प्रदर्शनीमा फेरि लुम्बिनी भारताँ भनेर राखिराछन् रे....यो लुम्बिनी जोगाउन नि गारो भो यार।
आफ्नै ससुराली त हो....
हैन हउ, ससुराली जान पर्छ कि के हो तीजैको दिन भए पनि। न अफिस छ, न घरमा कुनै काम गर्ने जाँगर। ह्या जे सुकै भनुन् ससुराली आफ्नै हो के रे लाइयो अब....भन्ने पनि होलान् है कोही कोही। म त त्यस्तो छैन....(हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
Sept 11, 2010 on Feedback
तीजको शुभकामना नदिम्न
यहाँ तीज सपिङले खल्ति पुरै अस्तव्यस्त,बुढी माइत गएर घर पुरै अस्तव्यस्त,बेलाँ नखार पेट पुरै अस्तव्यस्त छ। अझ यस्तो बेलाँ साथीभाइ (केटाहर्नै)जो अनलाइन आयो तीजको शुभकामना दिन्छन् यार। ट्वा्क्क टाउकाँ खो दिउँ जस्तो ...
के डेरा के घर
आफ्नै हो जस्तो
र होइन जस्तो पनि लाग्ने
यो पृथ्वी माथिको घर
तपाइँको पनि डेरा हो।
म मात्र हैन तपाइँ पनि
यो स्थायी माटोको अस्थायी बासिन्दा, करार बासिन्दा।
-कवि सुरेश हाँचेकाली
बस चढ्नु अगाडि मलाई लागेको थियो, म सापिन जाने आफन्त दाइहरुको डेरा भएको ठाउँलाई बागबजार भन्छन्। 'ए त्यसो भए त तिमी बस्ने ठाउँ र क्याम्पस नजिकै रहेछ,' बस चढाउन आएका मामाले भन्दा म अलमलिएँ। भृकुटीमण्डपस्थित रत्नराज्य क्याम्पस, आफन्त दाइहरु डेरा गरी बस्ने ठाउँ भन्दा निकै पर थियो। सिट नपाएर मुडामा बसेर रातभरको यात्रा गरिरहँदा मैले सम्झें, म जाने ठाउँको नाम बागबजार होइन नयाँबजार हो। त्यो बेला काठमाडौं भित्र बाहिर गर्ने सबै बस अहिलेको पुरानो बसपार्कबाट चल्थे। बसपार्कबाट नयाँबजार जान नसकेपनि नयाँबजारको मामा कन्फेक्सनरी गल्लीमा पुर्याइदिएपछि दाइको डेरा पत्ता लाउन सक्छु भन्ने विश्वास थियो। दुई तिर अग्ला अग्ला पर्खाल भएको साँघुरो गल्लीको सम्झना थियो। म एक्लै काठमाडौं आउनु पहिले बा र म दाइको डेरामा बसेर भर्नाका लागि क्याम्पसहरु चहारेका थियौं।
यस्तो तालले छिट्टै विकास हुन्छ
होइन हउ,यस्तो पनि हुन थालेछ नि ! राष्ट्रपतिकी भतिजा, प्रधानसेनापतिकी भतिजी र रक्षा सचिवका साला तीन जनाले नेपाली सेनाको अधिकृतस्तरको परीक्षामा सामेल भए नि तीनै जना फेल भए रे। राष्ट्रपति र प्रधानसेनतपतिले दबाब दिँदा पनि सैनिक अधिकृतमा आफन्त घुसाउन सकेनछन्...नेपालकै सम्चार हो साथी कान्तिपुर पत्रिकाले छापेको। यस्तै तालले त देशको विकास कुर्न धेरै दिन पर्खन पर्ला जस्तो छैन।
तटस्थ त बस्नै नपाइने भो
फेरि आज अर्कोले एमाले झैं तटस्थ भनेर गाली गरो।'फेसबुकमा रिक्वेसट गरेको; कि इग्नोर गर्दिनु कि असेप्ट गर्दिनु; एमाले झैं तटस्थ नबसिदिनु'रे। झो‍क चलेर पेन्डिङमा बसेका करिब चार सय जति रिक्वेस्टलाई असेप्ट गर्दिएँ। धन्न फेसबुकले पैसो लिँदैन...(हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
शहरका अग्ला घरजति सप्पैमा टुप्पी रचन्...
ए नेपालाँ फिल्मी टिभी च्यानल नि आउने भएच। गोपिकृष्ण फिल्मले ल्याउने रच। रामराम कति धेरे हुन लागे हउ नेपालाँ टिभी च्यानल। यिनको गणित(आयव्यय)चाहिँ कस्तो छ कुन्नी?यो टिभी,एफ एम रेडियो,मोबाइल,फुन के के ले गर्दा होला काठमाडौका अग्ला घराँ टुप्पी नठडिएको त देख्नै छोडियो। रुख कम, एन्टेना टावरवाला टुप्पी धेरै भर होला आजभोलि धेरैजसो टुप्पीआँ चराको गुँढ देख्न पाइन्छ...
मधेसीको झर्ला र पाउँला भन्दै बस्दा जुग बित्ने भो
प्रधानमन्त्री चयन नहुनुमा सरासर सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दोष छ। एकदिनमै तीन तीन चोटी चुनाव गराको गराई गर्‍या भए अहिलेसम्म देशले प्रधानमन्त्री पाइसक्थ्यो-एकजना विद्वानले भने। आठ पटक नहुँदै मधेशी सभासदहरु थाकेर'अब माउवादीलाई दिन पर्ला'भन्नथाले। माउवादी बिचराहरु पनि हरेकपटक चुनाव अगाडि अहिले नभए नयाँ रणनीति भन्छन। चुनाबपछि फेरि मधेशीहरुको झर्ला(मत)र पाउँला (प्रधानमन्त्री) भन्दै बस्छन्...हँसाओ जग
माइक्राँ कोच्चे हुन्छ सौना लिन पर्दैन
धन्न यो पसिना निकाल्न सौना,ज्याकुजी के के मा हो जान पर्दैन आफूलाई। अफिसट घर जाने बेलाँ सुन्धाराट सामाखुशी जाने माइक्रोबसाँ चढ्छु। १२ जना चढाउने अनुमति पाएका माइक्रोमा धेरै होइन त्यही ३५ जना जति भइन्छ। ठमेल नपुग्दै पसिनाले निथ्रुक्क। जीउ पनि मालिस हुन्छ चारैतिरको घचेटाघचेटले। घर पुग्दा अलि खराब हुने भनेको जुत्ता मात्र हो। सौनाको पैसा जोगिइदियाछ माइक्राले...(हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)
राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि सहयोग स्वीकार्छम् ...
माउवादीले कुन दिन सबै टेपहरु बन्द गर्दिन्छ देशमा अनि थाहा पाउँछन्? कहिले शक्तिखोर टेप ल्याछन्। कहिले खन्ना गार्मेन्टको टेप ल्याछन्। कहिले चाइनिजसँग वार्ताको टेप ल्याछन्....महराले नि किन कुरा चपाई चपाइ बोलिराहा होला 'मेरो नै बोली हुन सक्छ भन्दै।' सिधै भन्दिए भैहाल्यो नि। मेरै हो- पार्टीको लागि, नेपाली जनताको मुक्तिका लागि र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि हामीले देशी र विदेशी मित्र शक्तिको सहयोग स्वीकार गर्छौ‍...
होस गरम् है दुकानदारहरु सभासदले कुट्लान्...
दुकानदारहरु होस् अरम है अरु जे भए नि सभासदहर ग्राहक भएर आउँदा। काँग्रेसकी सभासद कल्याणी रिजालले कुर्ता पसलमा रातो कुर्ता बेच्न नराखेको भनेर थुनाईदिइछन्। राम्रोसँग जवाफ फर्काएनन् रे नि त सभासदलाई पसलेले...धन्न आफ्नु दुकान छैन र ढुक्क छ। नत्र कुन बेलाँ सभासद गाहके बनेर आउने हुन् र कुटाइ खाइने हो पक्कै नहुने। सबै सभासदलाई चिन्न नि सकिन्न...
तीन्टा कुरा जाने एम्बेसीमा जागिर खान पाइन्छ जस्तो लाओ। पहिलो फोन ट्यापिङ, ठूल-ठूलाका फोन ट्यापिङ गरेर तिनले कहिले कोसँग गफ गर्छन् पुरै ट्यापिङ गर्ने। दोस्रो मिक्सिङ, महरा काण्डमा माउवादी नेता वर्षमान पुनले महराले नै पहिले बोलेका शब्दलाई मिक्सिङ गरेको भनेका छन् । तेस्रो क्यारिकेचर, कोहीकोहीले महराको क्यारिकेचर भनेका छन् ... म के जानुम तिम्रा लिला।
क्यारिकेचर र फुन टेपिङको लागि जागिर
हैन हउ शेरे ! दूताबासहर्ले क्यारिकेचर गर्नेहरुलाई नि जागिर दिन थालेकी के हो? महरा जस्तै बोल्ने क्यारिकेचर भारतीय दुताबासका लागि कल्ले गर्दिओ होला। एक दुई जनाको क्यारिकेचर गर्न सक्ने साथीले लउ न कुनै दुताबासाँ मलाई नि छिराइदे गणित (दाम) को दुःख भइराछ भनेको छ। क्यारिकेचर हैन भने नि फुन टेपिङको जागिर त दुताबासले देला नि। ...दुताबासैट आको हो भनेर सम्पादक जीले भनिहाले त...क्यारिकेचर र टेपिङ गर्न जान्नेका दिन आए.....
पार्टी तटस्थ; सभासदहरु घुस लिन र दिन व्यस्त
पृथ्वी नारायण शाहको पालाँ भए त एमाले भन्ने पार्टीको हविगत खत्तमै हुनेरहेछ नि। घुस दिन्या र लिन्या भन्दा केही काम गर्दैनन् यार एमालेका सभासदहरु। डिबी कार्की इनस्पेक्टर बनाइदिन्छु भन्दै घुस लियाथे। अर्का एमाले सभासद गोबिन्द नेपाली फेरि छोरालाई इनसपेक्टर बनाउन भन्दै घुस दियारैचन्। एमालेको अबको नारा यस्तो हुनुपर्छ :
सभासदहरु घुस लिन र दिन मस्त
पल्सरको इन्सुरेन्स नहुने रैछ
ल गज्जप! पल्सर मोटरसाइकलको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले विमा गर्दारैनछन् नि। धेरै चोरी हुन्छ भनेर रे। क्या रमाइलो छ यार। जुन सामाग्री चोरी हुन्छ, जुन बिग्रन्छ त्यसैको इन्सुरेन्स हुँदैन यार। कस्तो देश,कस्ता कानून, कस्ता इन्सुरेन्स कम्पनी.....
सुन्दरी प्रतियोगिताको विरोध हुन छाडेछ त...
माउवादीहरु परिवर्तन भाको पक्का रच नि। पहिले पहिले मिस नेपाल प्रतियोगिता हुँदा माउवादी काम्रेड्नीहरुले कति विरोध गर्थे सम्झनुभाछ होला। सडकमा कस्तो तानातान हानाहान हुन्थ्यो। यसपाली त माउवादीले मिस नेपालको विरोध गरेको कहिँ सुनिएन। कत‍ै तिन्का आफन्त पो भाग लिन थाले कि। परिवर्तन भाकै हो नि कतिपय काम्रेड्नीहरु आजभोलि ब्युटी पार्लर धाको सम्चार पढ्न पाइन्छ....
आज कान्तिपुरको मध्यपृष्ठमा हिमानीको फोटो देखेपछि पारस र हिमानीको जोडी मिल्यारच भन्ने लाग्यो। नाइटो पियर्स गरिरचन् नि हिमानीले त मुन्द्रा नि रच नाइटोमा..। पारस दाइले नि त्यसै कपाल पालेका होइनन् होला। एउटा साथीले भन्दैछ, टाटु कतिहोला है हिमानीको जीउमा...केटाहरु के के सोच्छन् सोच्छन्। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा.....)
फेसबुक नहुँदो हो त कहाँ राख्दा हुन् तेत्रा कविता
यसो सोचिराँ फेसबुक नहुँदा यत्रा मान्छेले तेत्रा भावना कहाँ पोखिराथे होलान्....
अरु भन्दा पनि कवि/कवियत्रीजीहरुको त विजोगै भा हुँदो हो। दिनमा सातवटा किताब निकाल्ने मिल्ने कविता आउँछ यार फेसबुकाँ.....
जाँच दिनभन्दा अप्ठेरो रैछ माउवादी केन्द्रीय सदस्यलाई
माउवादी केन्द्रीय सदस्य हुन नि गारो रैछ यार। जाँच दिन बसे जस्तो-आफ्नै पार्टीको प्रतिवेदन पनि पार्टी कार्यालयको बन्द कोठाँ बसेर पढ्न पर्ने। घर लान नपाइने,अरुसँग छलफल गर्न नपाइने। पटक पटकको अध्ययन,चिन्तन मनन र जानेबुझेकासँग छलफल गरेर पो पार्टी नीति बननाउनु पर्ने होइन र। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन घरसम्म लान पनि केन्द्रीय सदस्यमाथि विश्वास नगरेर नि पार्टी चल्दो रैछ नयाँ नेपालाँ...म के जानुम।